Izibhedlela nezinsizakalo eziphuthumayo - Ukuboniswa okulula okulula - izimpawu zedijithali
I-Easy Multi Display isiza odokotela emsebenzini wabo wansuku zonke!
"Nge-Easy Multi Display, singafundisa iziguli lapho zilinde ukuhlolwa"
Idalwe ngo-2017, isibhedlela i-Angré University Hospital esise-Ivory Coast futhi ngokunembile edolobheni lase-Abidjan lingenye yamakhasimende ethu okuqala!
Lesi sakhiwo esisha sha esisenkabeni yedolobha elikhulu ezweni kusekelwe ekusebenzeni kodokotela babo. Ngakho-ke, izinhloko zeminyango zikhethelwe ulwazi lwazo lomtholampilo!
Isibhedlela sase-Angré sikhethe ukucushwa kwezikrini eziyi-10 ukuhlinzeka sonke isibhedlela!
Sibanikeze izinhlobo ezimbili zebhizinisi ze-Easy Multi Display ukuze basebenzise irimothi futhi ngaleyo ndlela bathuthukise ukunethezeka kwabo kokusebenzisa!
Namuhla, bajabule kakhulu ngesixazululo esinikezwe yi-Easy Multi Display!
Iwebhusayithi ye-Angré Hospital 'iwebhusayithi
Isizathu silula, yithina kuphela esingadingi ukuxhumana kwe-inthanethi ukuze sisebenze (ukuxhumana akuthembeki ngaso sonke isikhathi e-Ivory Coast) futhi yithi futhi esingabizi kakhulu emakethe.
I-Easy Multi Display ikwazile ukwenza lo msebenzi ngoba nge-software yethu kungenzeka ukukhombisa amavidiyo ngefomethi ye-MP4, izithombe nokunye okuningi!
Ukuboniswa okulula okuningi kuvumelana nokuhlelwa kwakho
Yeka ukuzivumelanisa nesoftware yezimpawu zedijithali yabanye bese uvumela i-Easy Multi Display ivumelane nokucushwa kwakho! Nge-software yethu ungabonisa kufika kuma-monitors angama-6 kuze kube kuzindawo ezingama-24!
Thuthukisa ulwazi lweziguli zakho
Yenza izimpilo zeziguli zakho zibe lula ngokuthuthukisa induduzo yazo ngesikhathi sokulinda. Sakaza amavidiyo, i-infographics nokuningi!